Finoana Katolika: Inona no antsoina hoe Antson'Andriamanitra
dimanche, 19 juillet 2020 13:04
Matetika hitatsika ireny Mopera na Masera na Frera sy Relijiozy ireny, dia tonga ao an-tsaina ny hoe, ahoana no ahafantarana fa voantson'Andriamanitra.
Inona moa no antsoina hoe Antson'Andriamanitra
Ny olona rehetra tsy misy ankanavaka, eny na ireo tsy mahalala an'Andriamanitra aza, dia misy antony anirahin'Andriamanitra azy avokoa eto ambonin'ny tany.
Tsy ny Mopera na Masera ihany izany no Antsoin'Andriamanitra fa isika Laika rehetra ihany koa. Ny fanambadiana dia Antson'Andriamanitra.
Efa matetika noresahina teto fa mitovy ny iraka ampanaovin'Andriamanitra ny Laika sy ny Mopera na Masera na Relijiozy fa ny andraikitra sy ny asa no samihafa, dia ny Famonjena ny Olombelona rehetra mba aha Zanak'Andriamanitra antsika, ny fizarana fitiavana amin'ny alalan'ny Fitoriana ny Tenin'Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny Asa izany, na amin'ny alalan'ny Teny, na amin'ny alalan'ny Vavaka.
Zava-dehibe loatra ny aina, isika Laika no omen'Andriamanitra fahefana hanorina fianakaviana, hiteraka, toa ny fahefany nahary ny olombelona no hiariantsika zanaka. Ka saro-pady amin'ny Fiangonana izany ny fanambadiana. Izay no mahatonga ny Pretra tsy mety hanao Batemy ny zanatsika raha isika Ray aman-dreny aza tsy vonona hiroso amin'ny Antson'Andriamanitra amin'ny fanorenana tokan-trano araka ny finoana Katolika. Ianareo Ray sy Reny niteraka azy tsy miroso, ka nahoana ny zaza tsy tompon-tsafidy no aroso fehezina.
Mety hiteny isika ny hoe, zaza tsy manan-tsiny ka nahoana no saziana tsy ho zanak'Andriamanitra atao Batemy, nefa ny Ray aman-dreny no nanao ny nataony. Izay no hisian'ny hoe fantaro ny Antson'Andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Bevoka tampoka tsy nampoizina, nefa ny Ray matetika tsy hita izay nalehany, manatona hatrany ny Pretra fa izy afaka manampy anao hatrany.
Raha hiverenana ny hoe ahoana ny ahafantarana fa tena Antson'Andriamanitra no ao amintsika.
Misy tantara eo anivon'ny Fiangonana, eny hatrany amin'ny Testamenta Taloha, mety misy feo avy any an-danitra, mety misy afo na famantarana manokana, nisy ihany koa ny feon'Anjely, na kintana nitarika ny Majy, na fisehoan'ny Masina Maria toa ny tany Lourdes, mety ho tamin'ny alalan'ny nofy, toa an'i Josefa nahita fa nitoe-jaza Maria vadiny, nefa mbola tsy niara-nandry izy ireo, ka saika hitsaitsaika ny lehilahy tsy ho afa-baraka eo amin'ny mpiara-monina. Nefa tamin'ny alalan'ny nofy no nilazan'Andriamanitra fa ampakaro ho vadinao i Maria, fa Zanak'Andriamanitra io mitoetra ao ankibony io.
Raha ny saintsika olombelona dia enjana be izany, ahoana ny inoana izay nofy any, tsy naharenesam-peo anefa i Masindahy Josefa raha jerena ny Baiboly, nefa dia azo antoka fa namono tena mihitsy izy niasa sy nikolokolo ny vady aman-janany. Izany rahateo no nanasokajiana azy ho Olomasina mpiaro ny mpiasa.
Izany no hilazana hoe, tsy misy fomba manokana ahafantarana ny Antson'Andriamanitra, fa ny fiainanao andavan'andro dia misy zavatra mahasarika anao hatrany, manosika anao hanao sy haniry ilay zavatra. Mety misy zavatra nandalo na niseho dia nanaitra anao, izay ilay fomba hisehoan'ny Antson'Andriamanitra aminao.
Mila mivavaka izany, mila miresaka amin'Andriamanitra, eny mety mitamberina ao antsaintsika hoe miezaka mihaino ny Antson'Andriamanitra isika fa tsy henontsika izany, toa tsy misy miteny. Ny feon'ny fieritreretantsika dia efa ny Fanahy Masina no mibitsika izany amintsika, hoe tsara na ratsy izany.
Rehefa misy zavatra atao, indrindra fa zava-dehibe amin'ny fiainana, dia mivavaha manokana, eny manaova laretrety na fisitahana masina. Manantona ny Pretra miresaka sy mizara ny tebitebin-tsainao.
Ahoana no ahafantarana fa antsoina hanao mopera na masera.
Mitovy amin'ny Antson'Andriamanitra amin'ny Laika ihany io, misy ao amponao ao faniriana mafy isan'andro ny finiavana hanokan-tena ho Pretra na Relijiozy. Fantaro, inona ny asan'izy ireo, inona no adidy sy fepetra ao anatin'izany, zakanao sy irin'ny fonao ve izay, sa hoe nisaraka tamin'ny sipako aho ka mamoy fo ka hiditra mopera aho na andeha hanao masera fa tsy te hierika lehilahy intsony fa ratsy vintana ara-pitiavana aho, izay iarahana toa mamoantsampona avokoa?
Aza adino fa na Papa François aza, dia efa nanana fofom-bady no nahatsapa ny Antson'Andriamanitra taminy, dia nanao mopera, dia izy lasa Papa io.
Mety misy aza any am-boalohany noho ny fahasahiranana dia hoe hiditra seminarista ho mpianatra mopera, na miditra kongregasionina masera mba sitrany misy miantoka ny fiainana sy ny fianarana. Mety any tokoa vao tafiditra an-tsainao ny Antson'Andriamanitra, fa raha tsy lalanao iny, fa izay asarotam-piainana izay fotsiny no idiranao any, na ireo Lehiben'ny Seminera ihany dia ahita fa tsy lalanao ny any, dia anajanona anao.
Voady mandra-maty tokoa manko ny mariazy fanorenan-tokantrano, toa ny voady hanao Pretra na Relijiozy. Betsaka ireo fiofanana sy sedra ataon'ny Fiangonana vao miroso amin'izay fanaovana voady izay izy, ka ahatonga ireo fihofanana lava be na ho an'ireo hanorona tokantrano, na ireo hiroso hanao Mopera na Masera na Relijiozy.
Raha efa mopera na masera na efa manam-bady vao te hiala satria diso lalana?
Misy izany, raha eo anivon'ny Fiangonana Katolika, dia ny Eveka no manam-pahefana amin'izany, satria ny voady dia mandra-maty, izay no dikan'ireny peratra, na ataon'ny mpivady amin'ny tanana havia, na ataon'ny mopera amin'ny tanany havanana ireny, fifamatorana eo anatrehan'ny Fiangonana sy Andriamanitra, izay tsy azo vahana, fa izay vahanareo ety an-tany dia voavaha, izay fehezinareo dia voafehy.
Ny fanambadiana Katolika izany dia tsy azo vahana, tsy misy ny fisarahana mbola samy velona amin'ny Katolika. Mety misy antony lehibe manokana, izay vao mamaha ny Eveka. Misy aza no mbola mety misy fierana amin'ny Papa vao voavaha. Toy izany koa ireo Pretra na Relijiozy vita voady te hiala. Fahotana lehibe eo anatrehan'ny Fiangonana ny miala amin'ny voady mandra-maty natao. Eny, hatramin'ny tsy fahazoana mandray ny Eokaristia mihitsy. Raha misy ny olana, manantona hatrany ny Pretra mizara izay olana izay.
Ny Pretra dia efa nanao voady hitazona samirery ny tsiambara-telo eo amin'ny dinika na konfesy, na ny Eveka na ny Papa aza tsy afaka anontany, ary tsy anontany azy ny votoatin'ny dinika na ny konfesy. Misy fahefana voafetra ihany anefa ny Pretra, ka tsy maintsy miresaka aminao izy, inona no tsy maintsy hierena amin'ny Eveka na amin'ny Papa mihitsy aza ny toe-javatra sasany.
Ny Antson'Andriamanitra izany dia karohina sy ezahina henoina hatrany hatrany, aza mitady lavitra, fa misy olona tsy manan-kohanina mandondona eo ambavahadinao, efa Antson'Andriamanitra izay, mety hiteny isika hoe, izay lalana aleha toa feno mpangataka, efa tsy araka intsony, anjaranao no mandinika ny andraikitra tokony raisinao amin'ny fiainana andavan'andro, inona no andraikitra raisinao eo anivon'ny Fiangonana, amin'ireo fikambanana marobe ao anatin'ny Fiangonana, inona no andraikitra tokony raisinao eo anivon'ny fianakavianao, eo amin'ny toeram-piasanao, eo amin'ny fiaraha-monina misy anao, eny inona no andraikitra raisinao amin'ny maha Kristianina anao eo anivon'ny Firenenao?
Na dia feno fisalasalana aza ianao, dia mandehana hatrany, tohizo ny lalana tsara hitanao fa mety aminao sy ny manodidina anao. Ny fanahiana, dia zavatra misy hatrany, sao diso lalana aho, sao mba tsy tena izany no iantsoan'Andriamanitra ahy, inona no tena tian'Andriamanitra ataoko, toa manao an'itsy aho, nefa toa voasakana, sakanan'Andriamanitra ve, sa ny devoly no maka fanahy?
Toy ny mivoy bisikileta io, rehefa tsy mivoy ianao dia mianjera, fa voizo, mandrosoa lalina kokoa, fa Andriamanitra efa manana ny programany momba anao, fa anjaranao ihany koa no miezaka manantona azy sy mihaino azy, amin'ny alalan'ny fandalinana ny Teniny ao anaty Baiboly, ny fiaraha-monina sy ny fampianaran'ny Fiangonana.
Mety misy vaovao mampalahelo, ohatra izao ireny zaza menavava arian-dreniny eny an-dalana ireny, maty ilay zaza, Andriamanitra ve no diso sa mafy fo, ka navelany ho faty ilay zaza, tsy nisy olona iray ve nidinan'ny Fanahy Masina ka nahita mialoha ilay zaza mba ho avotra izy? Izay no maha Andriamanitra inoan'ny finoantsika izay, misy zavatra tsy takatry ny saintsika Olombelona ny zavatra ataon'Andriamanitra.
Mety nisy tamintsika nahita ireny toe-javatra ireny, ka latsaka ato ampontsika ny hoe hanokan-tena aho hamonjy ireny zaza na ireny Reny tratr'olana ireny mba tsy anariana ireny zaza ireny, Antson'Andriamanitra amintsika daholo izany.
Isika mpitondra, manomboka amin'ny fokotany ka hatrany an-tampony, inona no andraikitsika manoloana ireny fahorian'ny olona, ka tonga hatramin'ny fanarian-janaka ireny, Antson'Andriamanitra avokoa izany. Firiry isika no Kristianina vita Batemy, nefa mbola feno kolikoly, eny na eny amin'ny filaharana Taxi-be dia manao mahafantatra olona dia misongona, Antson'Andriamanitra avokoa izany.
Tsy misy kely na lehibe izany ny Antson'Andriamanitra, fa lehibe eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izay rehetra tsara ataonao.
Ny vavaka sy ny fiantsoanao ny Fanahy Masina anazava ny lalanao no ahitanao isan'andro ireo antso ataon'Andriamanitra aminao.